Umnakekeli obehlukumeza izingane uzogwetshwa | Scrolla Izindaba
Inqwaba yabazali bebemethemba ukuthi uzonakekela izingane zabo.
Kepha lo mnakekeli uchithe izinsuku zakhe eshaya ngempama, ehudula futhi ekhahlela izingane ezincane ngaphandle kwesizathu esizwakalayo.
Umnakekeli waseNingizimu Afrika ovela esihogweni akagcinanga nje ngokushaya kuphela.
Ubezikhumulisa amabhulukwe izingane ukuze azozishaya kahle.
Kwakungeyona into engajwayelekile e-Ninnies Neuron’s Nursery e-Carletonville ukuthi lo mnakekeli ashaye ingane ebusweni ngaphezu kwamahlandla amaningi.
Ubunzima nokuhlukunyezwa kwezingane bathathwa ngekhamera ngomunye umnakekeli futhi kwashaqisa isizwe.
Ngesonto eledlule, iNkantolo yesiFunda yase-Oberholzer imthole enecala lokushaya ngenhloso yokulimaza.
NgoLwesibili inkantolo ilalele izimpikiswano zokukhulisa isigwebo, belalela udokotela wezengqondo wombuso ethi ezinye izingane azisoze zakhohlwa ukuhlukumezeka ezakuthola.
Icala lihlehliselwe umhla zi-13 kuMfumfu ukuze abammeli bezokuvikela balungiselele ukuphenya ubufakazi obethulwe ngudokotela wezengqondo.